Waze Local: Waze ယာဉ်မောင်းများသူတို့ဝန်းရံနေသည့်အချိန်တွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုကြည့်ပါစေ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2016 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2016 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်ကားထဲကိုရောက်တိုင်းပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်ပါ Waze အက်ပလီကေးရှင်း။ ၎င်းသည် (သူပိုင်ဆိုင်သည်) ဂူဂဲလ်၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးထက်သာလွန်သည်။ သင်ကဲ့သို့ Apple ကဲ့သို့ရှုံးနိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လမ်းတစ်လျှောက်ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်အသွားအလာများကိုလူစုလူဝေးများကရှာဖွေနေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခြေလေးလံနေပြီးလက်မှတ်များရရှိသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အစီရင်ခံရန်နှင့်အစီရင်ခံထားသောအမြန်နှုန်းထောင်ချောက်များကိုတွေ့နိုင်သောကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ The ရဲ Waze မထီမဲ့မြင်မပြု.
Waze သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောမြင်သာမှုကိုပေးသည် ဒေသတွင်း။ နေ့စဉ်ဘတ်ဂျက်နှင့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုယာဉ်မောင်းများ၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များသို့ ဦး စားပေးမည်။ သင်၏လုပ်ငန်းအနီးရှိဖောက်သည်များနှင့်လည်းထိတွေ့မှုရှိသည် တံဆိပ်တံသင် မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏တည်နေရာကိုမှတ်သားသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ရလဒ်ကိုအသာပုတ်ပါက၎င်းတို့သည်ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပြီးတည်နေရာကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရန်အချက်ပြပါလိမ့်မည်။
Waze Local သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်နိုင်သော dashboard ကိုထောက်ပံ့သည်။
စျေးနှုန်းသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ ဒေါ်လာသာပေးရသော CPM ပုံစံဖြစ်ပြီးသင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့လစဉ်ငွေကောက်ခံပါသည်။
သင်နေရာ ၁၀ နေရာထက်ပိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကသင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် Waze ကြော်ငြာများ။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင်မျက်နှာပြင်တံဆိပ်တံသင်၊ ဖုန်းမျက်နှာပြင်လွှဲယူမှုများ၊ မြှားများနှင့်ထင်ရှားသောရှာဖွေမှုရလဒ်နေရာချထားမှုများရှိသည်။ သင်ကားမောင်းသူအမျိုးအစားနှင့်သူတို့မည်သည့်နေရာတွင်မောင်းနှင်နေသည်ကိုလည်းပစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာ (ရာသီဥတုကဲ့သို့!) ။
Tags: မောင်းနှင်မှုကားမောင်းကြော်ငြာများပထဝီGISမြေပုံWazewaze ကြော်ငြာဒေသတွင်း
ဒီဇင်ဘာ 15, 2016 မှာ 10: 22 AM
Waze သည် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေများသော လူသွားလမ်းလာများ၊ ကား၊ စက်ဘီးနှင့် ရထားလမ်းဆုံများကို ပြသရန် များစွာပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အချက်အလက်ရှိတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 15, 2016 မှာ 11: 03 AM
Jeff၊ မင်းက အရောင်းသွက်နေတာလား။ ဒီလိုဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂